Mazuva ano mabhokisi emadhirowa - Fenicha - kurudziro
Chikamu: Mazuva ano mabhokisi emadhirowa
Ivawo nemafashoni zvakare. Uri kugovera furati here? Usakanganwa zvekushongedzwa, izvo hazvingogadzise chete dhizaini basa. Mazuva ano mabhokisi emadhirowa ari kudiwa kwazvo nhasi. Kune vamwe, ivo vanodikanwa mubhedhuru, imba yekutandarira, mukoridho asiwo mukamuri revana. Tese tinozviziva izvozvo. Zvinhu zvakawanda, nzvimbo diki. Bhokisi rinobatsira remadhirowa richagadzirisa dambudziko iri kumhuri dzakawanda. Unogona kusarudza hukuru hwakasiyana kuti uve nechokwadi chekuwanda kwenzvimbo yekuchengetera. Pamusoro peichi chikamu chinoshanda, mabhokisi edu evadhirowa anosanganawo nemaitiro azvino uye zvinodiwa nevatengi.
Chest yemadhirowa eimba yekutandarira
Chivabvu 29, 2020 Kukadzi 16, 2021 arun
Ndeupi mupfeki wekusarudzira yekutandarira? Ndeapi mafashoni echizvino-zvino, ndeapi machira aunosarudzira pachipfuva chako chemadhirowa uye nezvimwe isu tichakupa zano mune inotevera chinyorwa. Parizvino, iyo inonzi shanduro dzemadhirowa, zvipfuva zvemadhirowa zvine makabati, akakwirira uye akatetepa, akafara uye akaderera. Vagadziri vanonyatsofunga nezvese zvinhu, zvevatengi vese, saka vanowanzoedza kuchinjira kwavari uye nekuvapa zvakaringana […]
1 Kurume, 2018 Kukadzi 16, 2021 arun
Kana iwe parizvino uri muchikamu chekupa imba yako uye neimwe nzira uchiri kushaya imwe nzvimbo yekuchengetera, asi kabhodhi hombe haina kuwedzera nzvimbo yakakwana, kana kuti haikwane mukamuri rako, usaore moyo. Wadhirobe haisiriyo mhinduro chete, pane imwe chete, inoshanda zvakanyanya - chipfuva chemadhirowa. Iyi fenicha inoyevedza inozadzikisa basa rayo rekushongedza pamwe neiro rinoshanda. Zvisinei, […]